Buzz, Viral na marketing amin'ny vava: inona no mahasamihafa azy? | Martech Zone
Buzz, Viral na marketing amin'ny vava: inona no mahasamihafa azy?
Talata, Aprily 14, 2015 Alatsinainy Aprily 13, 2015 Douglas Karr
Dave Balter, mpanorina ny BzzAgent, dia miasa tsara amin'ny famaritana ny tsy fitoviana Buzz, Viral ary Word of Vava Marketing ato amin'ity fanontana ChangeThis ity. Ireto misy sombiny miaraka amin'ny famaritana tsara nataon'i Dave:
Inona no atao hoe Marketing of Word?
Tenin'ny marketing Marketing (WOMM) no mpanelanelana matanjaka indrindra eto ambonin'ny planeta. Ny fizarana hevitra momba ny vokatra na serivisy eo amin'ny mpanjifa roa na mihoatra. Izany no mitranga rehefa lasa mpisolo vava marika voajanahary ny olona. Izy io dia ny masomboly masin'ny mpivarotra, CEO ary mpandraharaha, satria mahavita na mamaky vokatra io. Ny lakilen'ny fahombiazany: mahitsy sy voajanahary izy io.
Inona no atao hoe Marketing Viral?
Marketing marketing dia fanandramana handefa hafatra marketing izay miparitaka haingana sy haingana amin'ny mpanjifa. Androany, matetika io dia tonga amin'ny endrika mailaka na horonan-tsary. Mifanohitra amin'ny tahotra fanairana, tsy ratsy ny viral. Tsy manao ny tsy marina na tsy voajanahary. Amin'ny tsara indrindra, mandeha am-bava izy io, ary ny ratsy indrindra dia hafatra ara-barotra manelingelina ihany.
Inona ny atao hoe Buzz Marketing?
Buzz Marketing dia hetsika na hetsika iray izay miteraka laza, fientanam-po ary fampahalalana ho an'ny mpanjifa. Matetika izy io dia zavatra iray izay manambatra fisehoan-javatra mahatsikaiky, mandatsaka valanorano na traikefa amin'ny marika madio, toy ny fanaovana tombokavatsa ny handrinao (na ny borikinao, toy ny nataon'ny klioban'ny fahasalamana NYC). Raha vita tsara ny buzz dia hanoratra momba izany ny olona, ​​ka lasa fiara PR tena lehibe izy io.
Ity misy infographic miavaka amin'ny Word of Mouth Marketing (WOMM) avy amin'ny Lithium:
Tags: varotra buzzLithiummarketing viralWomVEHIVAVYteny vavavarotra am-bava
Ahoana no handrefesanao ny fiantraikan'ny algorithm amin'ny fikarohana finday?
17 Jun 2008 amin'ny 9:41 AM
Ho ahy dia heveriko fa ny Word of Mouth dia endrika marketing tena tsara, saingy averiko indray fa miverina amin'ny tena lazain'ny olona momba anao izy io. Mety ho sabatra roa sosona izany. Raiso ohatra ny indostrian'ny sarimihetsika. Mandeha amin'ny sarimihetsika aho rehefa milaza amiko ny namako fa nahita horonantsary izy ireo ary tiany. Etsy ankilany, rehefa faly amin'ny horonantsary aho ary mahazo tatitra ratsy avy amin'ny namako, dia ny mifanohitra amin'izay indrindra no ataoko.
Manontany tena aho raha mahitsy amin'ny bilaogy sy tranokala ity?